किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन ? चाइनिज युवतीहरु, यस्तो रहेछ कारण (तस्विर सहित) – Online Nepal
July 3, 2020 270
यसको लागि पालिस नगरिएको चामललाई एउटा भाँडोमा राखेर भिजाउँनुस। केही समयमा माथी सेतो तह देखिन्छ। त्यसपश्चात पानी मात्र छानेर त्यसलाई फ्रिजमा राख्नुस्। यो पानी तीनचार दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। कपासको मद्धतले यो अनुहारमा लगाउनुस्।तीनचार दिन पश्चात फेरि यसरी नै नयाँ पानी बनाएर फ्रिजमा राख्नुस्। चिनियाँ युवती ग्रिन-टीको सहयोग लिन्छन्। हरेक दिन बिहान कप ग्रिन टि पिउँनाले पेट स्वस्थ्य हुनुको साथै नियमित प्रयोगले जवान देखिन मद्दत गर्छ।
Prevपति हुँदाहुँदै होटेलभित्र हेडसरसँग जनप्रतिनिधिको मायापिरती
Nextहरेक दिन अलिकति सासुलाइ बिष खुवाउने यी बुहारी…..
आज राती १२ बजेबाट काठमाडौंमा हुनेभयो लकडाउनमा भन्दा झनै कडाइ, के गर्न पाईन्छ के गर्न पाईदैँन ? हेर्नुस् विस्तृतमा